China kubvisa Suction Catheter fekitori uye vagadziri | Kangyuan
• Yakagadzirwa neasina - chepfu kurapwa - giredhi PVC, yakajeka uye yakapfava.
• Akapedzeredzwa zvakakwana maziso epadivi uye akavhara distal magumo ekukuvadza zvishoma kune tracheal mucous membrane.
• T mhando chinongedzo uye conical chinongedzo chiripo.
• Ruvara-kodhi kodhi yekubatanidza yekuziva saizi dzakasiyana.
• Inogona kuve yakabatana neLuer connectors.
Kurongedza: 100 pcs / bhokisi, 600 pcs / katoni
Saizi katoni: 60 × 50 × 38 masendimita
Ichi chigadzirwa chinoshandiswa pakiriniki sputum aspiration.
Ichi chigadzirwa chinoumbwa nekateti uye chinongedzo, catheter inogadzirwa neyekurapa giredhi PVC zvinhu. Iyo cytotoxic reaction yechigadzirwa haina kupfuura giredhi 1, uye hapana kukurudzirwa kana mucosal kukurudzira kwekuita. Chigadzirwa chichava chisina uye, kana chikaomeswa ne ethylene oxide, hachizosiya chinopfuura 4mg.
1. Zvinoenderana nezvinodiwa zvekiriniki, sarudza iwo marongero akakodzera, vhura bhegi remukati rekutakura, tarisa mhando yechigadzirwa
2. Zano rechipfuva chekutsveta chubhu raive rakabatanidzwa kune yakashata yekumanikidza yekubatira catheter mukiriniki nzvimbo, uye kupera kweiyo sputum suction catheter yakaiswa zvishoma nezvishoma mumuromo wemurwere munzira yekuburitsa sputum uye zvakavanzika kubva kune trachea.
Hapana zvinopesana zvawanikwa.
1. Usati washandisa, iwo marongero akakodzera anofanirwa kusarudzwa zvinoenderana nezera uye huremu, uye mhando yechigadzirwa inofanirwa kuyedzwa.
2. Ndokumbira utarise usati washandisa. Kana chimwechete (chakazara) chigadzirwa chikawanikwa chine mamiriro anotevera, zvinorambidzwa zvachose kushandisa:
a) Zuva rekupera rekubvisa
b) Pakeji imwe chete yechigadzirwa yakanganisika kana ine nyaya yekunze.
3. Ichi chigadzirwa ndechekiriniki kamwe-nguva kushandiswa, kuvhiyiwa uye kushandiswa nevashandi vekurapa, uye kuparadzwa mushure mekushandisa.
4. Mukuita kwekushandisa, mushandisi anofanira kuongorora panguva yakakodzera kushandiswa kwechigadzirwa. Kana paine tsaona chero ipi zvayo, mushandisi anofanira kurega kushandisa chigadzirwa ipapo uye vashandi vezvekurapa vazvibate nemazvo.
5. Ichi chigadzirwa is ethylene oxide sterilization, sterilization nguva yemakore mashanu.
6.Kutakura kwakakuvara, saka kushandiswa kunorambidzwa.
Chengetedza munzvimbo inotonhorera, ine rima uye yakaoma, iyo tembiricha haifanire kukwira kupfuura 40 ℃, isina gasi inoparadza uye yakanaka mweya.
[zuva rekupera] Ona mukati yekutakura chitaridzi
Mugadziri: HAIYAN KANGYUAN CHEMA ZVINODZIDZISWA CO., LTD
Pashure: Inoraswa Endotracheal Tube Kit
Zvadaro: Kubvisa-Kuburitsa Access Sheati Yekushandisa Imwechete
pvc kubvisa catheter
suction catheter fekitori
suction catheter mugadziri
kubvisa kubvisa catheter nokutengesa
Inoraswa Anesthesia Mask
Reusable Laryngeal Mask Mhepo
Endotracheal Tube Yakajairwa
Inoraswa Endotracheal Tube Kit
Laryngeal Mask Airway neEpiglottis Bar